Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny fiakaran'ny vidin'ny karbaona anatiny
Rehefa mitombo ny ahiahy amin'ny fiovan'ny toetrandro, miatrika fepetra henjana ataon'ny governemanta izay manasazy azy ireo noho ny fisondrotan'ny gazy karbonika ny orinasa. Ireo sazy ireo dia matetika avy amin'ny endrika fandaniam-bola ary matetika fantatra amin'ny hoe haba haba.
Manohitra ny hetra karbaona ny orinasa sasany.
Ny sasany kosa mahatsapa ny antony ampiharana ny hetra ary manandrana mampihena ny entona fandefasana entana.
Ny fomba iray mahazatra dia izay matetika antsoina hoe ny vidin'ny karbaona anatiny.
Raha tsorina, ny vidin'ny karbaona dia mifandraika amin'ireo orinasa mametraka lanja amin'ny famoahana azy ireo. Na dia teôria aza io vidiny io dia mampahafantatra fanapahan-kevitra marobe izy io ary manampy ny orinasa tsy homba ny karbaona.
Tsy mahagaga raha maro ny orinasa mandray ny hevitry ny hetra karbaona. Araka ny voalazan'ny Carbon Disclosure Project (CDP), orinasa maherin'ny 2,000, izay misolo vola mitentina 27 tapitrisa tapitrisa dolara amerikana, no nilaza fa mampiasa karbona anatiny na drafitra hampiharana iray ao anatin'ny roa taona manaraka izy ireo.
Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny karbona anatiny dia mahazatra amin'ny indostrian'ny angovo, fitaovana ary ny asa ara-bola.
Ny vidin'ny karbaona anatiny dia ahafahan'ny orinasa mametraka ny vidin'ny tsena amin'ny famindrana karbaona be dia be, na dia misy aza ny hetsika vitsivitsy ataon'izy ireo iharan'ny politika ivelany momba ny vidin'ny karbaona sy ny lalàna mifandraika amin'izany.
Amin'ny fomba manaraka ireto dia mampiasa ny vidiny anatiny ny orinasa:
Manan-kery eo amin'ny fanapaha-kevitra momba ny fandaniambola, indrindra raha misy fiantraikany mivantana amin'ny famoahana ny tetikasa, voalohany indrindra raha misy fiantraikany mivantana amin'ny famoahana, fiarovana ny angovo, na fanovana eo amin'ny fifangaroan'ny loharanom-angovo ny tetikasa.
Manombatombana, mamolavola ary mifehy ny risika ara-bola sy ara-pitantanan'ireo rafitra misy ny vidin'ny governemanta.
Mba hanampiana hahita risika sy fisokafana ary hanovana paikady mifanaraka amin'izany.
Ny vidiny voafantina anatiny dia manome taratra ny hetra karbaona na sarany napetraka amin'ny faritra misy azy ireo ho an'ny fikambanana sasany. Ny orinasa sasany dia mety tsy manana fiasa amin'ny faritra misy politika mazava momba ny vidin'ny karbôna.
Samy hafa be ny vidiny nofidian'ny orinasa manerantany, miaraka amina orinasa sasany ny vidin'ny karbaona ambany hatrany amin'ny iray isan-jato taonina. Mifanohitra amin'izany, ny hafa dia manombana azy mihoatra ny $ 100 isaky ny taonina.
Ny vidin'ny karbaona voafantina dia miankina amin'ny indostria, ny firenena ary ny tanjon'ny orinasa. Alohan'ny hanazavantsika ireo fomba isan-karazany ampiasain'ny orinasa amin'ny vidin'ny karbona anatiny dia ilaina ny mahatakatra ny fomba fanapaha-kevitr'izy ireo amin'ny vidin'ny karbaona.
Fandrefesana dian-tongotra karbaona
Eo am-pialana voly dia mila manana fahatakarana mazava momba ny azy ny orinasa famokarana entona.
Na dia firenena sy fanjakana isan-karazany aza no nanara-dalàna isan-karazany momba ny tontolo iainana sy ny vidin'ny karbaona, ny orinasa no mamaritra ny habetsaky ny toerana misy azy sy ny toerana misy azy. Ny maso ivoho amerikana miaro ny tontolo iainana (EPA) dia mitantana ny tatitra momba ny famoahana mivantana avy amin'ny orinasa mpamokatra angovo any Etazonia.
Ny famoahana mivantana na ny haben'ny famoahana iray dia avy amin'ny loharano tompona na fehezin'ny orinasa - ohatra, ny fandefasana amin'ny fandoroana amin'ny boiler roa na ny fiaramanidin'ny fiarany. Ny fomba hanaraha-maso ireo famoahana ireo dia miankina amin'ny loharano. Ohatra, amin'ny smokestacks, azonao ampiasaina rafitra fanaraha-maso emission mitohy (CEMS) hanarahana ny fivoahan'ny gazy. Mpandalina CEMS afaka manara-maso gazy toy ny NOx, SO ihany koa2, CO, O2, THC, NH3, ary mihoatra.
Ny elanelam-bokatra roa tsy mivantana dia vokatry ny fahazoana herinaratra, hafanana, etona ary fampangatsiahana iray an'ny orinasa.
Ny fandefasana entona ankolaka hafa (sehatra 3) dia miseho ao amin'ny rojom-pivarotana orinasa iray, toy ny fanamboarana sy fitaterana fitaovana novidina ary fanariana fako. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny famoahana mivantana sy ankolaka dia manondro fa na ireo orinasa tsy misehatra amin'ny indostria mahery vaika aza dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny famoahana vaventy ihany koa.
Ny karbaona anatiny matetika dia mandray ny iray amin'ireo endrika telo ireo:
Sarany karbaona anatiny
Ny sarany karbaona anatiny dia ny sandan'ny tsena fandefasana karbaona isan-taonina nifanarahan'ny departemanta rehetra ao amin'ny fikambanana. Ny sarany dia mamorona fantsom-bola azo antoka hamatsiana vola ireo dingana isan-karazany nidina mba hampihenana ny fandefasana entam-barotra.
Ny elanelam-bidin'ireo orinasa mampiasa sarany karbaona anatiny dia avy amin'ny $ 5- $ 20 isaky ny metrik taonina. Ny fametrahana ny vidiny dia mitaky fandinihana lafin-javatra maro manerana ny orinasa mifanaraka amin'ny haba alaina sy ny fototry ny fomba ahazoana vola.
Misy karazany isan-karazany amin'ity karazana vidin'ny karbona ity, toy ny famolavolana rafitry ny tambin-karama sy ny varotra izay maka tahaka ny rafitra ivelany toa ny EU Emissions Trading Scheme. Ny vola azon'ity fomba ity dia ampanjifaina indrindra amin'ny tetik'asa maharitra sy maharitra.
Ny vidin'ny vidin'ny aloka dia vidiana teorika na heverina isaky ny taonina amin'ny famoahana karbaona. Miaraka amin'ny fomba fandaniana aloka, ny sandan'ny karbaona dia isaina ao anatin'ny hetsika ara-barotra. Mety ao anatin'izany ny famerenana tranga ara-barotra, ny fomba fanao amin'ny fividianana, na ny famolavolana ny politikam-pandraharahana hanondroana ny vidin'ny karbaona. Ny vidiny vokatr'izany dia ampitaina amin'ny mpitantana na ny tompon'andraikitra.
Matetika, ny vidiny dia apetraka amin'ny haavon'ny taratry ny vidin'ny karbaona ho avy. Ny vidin'ny aloky ny fomba karbaona dia manampy ny orinasa hahatakatra ny risika karbonika ary avy eo handamina ny tenany alohan'ny vidin'ny aloka lasa vidiny tena izy. Mety ho moramora kokoa ny fanatanterahana vidiny aloka ao anaty orinasa iray satria tsy misy fanovana ireo faktiora na fifanarahana ara-bola.
Ny vidiny mihoapampana dia mifototra amin'ny vola lanin'ny orinasa hampihenana ny etona entona entona na ny vidin'ny fanarahana ny fitsipiky ny governemanta. Ohatra, mety ho ny vola lanin'ny orinasa izany loharanom-angovo azo havaozina.
Ny vidiny miharihary dia manampy ny orinasa hamantatra sy hampihena ireo sarany ireo ary hampiasa ny fampahalalana azony hahazoana ny dian-tongotr'izy ireo. Ny vidin'ny karbaona implicit dia afaka mametraka takelaka alohan'ny fampidirana amin'ny fomba ofisialy programa momba ny vidin'ny karbona anatiny ho an'ny orinasa sasany.
Tombony azo amin'ny fametrahana ny vidin'ny karbaona anatiny
Ny fametrahana ny vidin'ny karbaona anatiny dia mety hanome tombony lehibe. Anisan'izany:
Ny fametrahana ny fifanakalozan-kevitra momba ny karbaona dia teboka ifantohana amin'ny asan'ny orinasa.
Arovy ny orinasa amin'ny vidin'ny karbaona ho avy
Manampy ny orinasa hamantatra sy hahatakatra ny risika karbonika sy karbaona amin'ny orinasa izy io
Ny tsy mahomby dia miaro ny paikadin'ny orinasa amin'ny ho avy
Miteraka famatsiam-bola ho an'ny angovo azo havaozina
Mamorona fahatsiarovan-tena ao anatiny sy ivelany
Manolotra vahaolana ho an'ny mpanjifa sy ny mpampiasa vola momba ny ahiahiny fiovan'ny toe-trandro
Mampihena ny gazy karbonika
Ny vidin'ny karbaona anatiny dia mety ho fitaovana hampihenana ny risika misy tombony maro ivelan'ny hetsiky ny orinasa, ny mpanjifa ary ny tontolo iainana. Raha ampifandraisina amin'ny fomba hafa, ny orinasa dia hanampy amin'ny fampiroboroboana tanteraka ny fiovan'ny karbaona ambany.